महाधिवेशनको संघारमा पुग्दै र विभिन्न कारणले पछि सारिँदै गरिएको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकेपछि पुनः अधिवेशनबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । नेविसंघका महामन्त्री
वाइडबडी प्रकरणः विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले वाईड वडी
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने काम मंगलबारदेखि प्रारम्भ गरेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले तीन दिनभित्र आफ्ना सांसदलाई रुचि रहको तीन मन्त्रालयको नाम पेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले बुधबारको बैठकमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आग्रह समेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सुटुक्क सहमति, प्रचण्डले गरे खुलासा
चितवन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार बेलुका केही बिषयमा सुटुक्क सहमति भएको छ । यसअघिसम्म एक अर्कोलाई कटाक्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच
सभामुखले संसदलाई जवाफदेही बनाउन नचाहेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई संघीय संसदप्रति जवाफदेही बनाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका सांसदद्धय ले आतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक महत्वको
मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको राजीनामा माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको राजीनामा मागेको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभाकी सांसद विन्दादेवी आलेले वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा घोटाला गरेको आरोप लागेको भन्दै
प्रधानमन्त्री अभिनन्दनमा कांग्रेसकाे विरोध
भगीरथ भण्डारी इलाम। पुस २० गते इलाममा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गर्न लागेको अभिनन्दनको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै
‘धर्म परिवर्तन गराउने खेल बन्द हुनुपर्छ’
मोरङ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण हुनुपर्ने साथै लोभमा धर्म परिवर्तन गराउने खेल बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन मोरङद्वारा
‘अधिनायकवादको छनक कर्मचारीबाटै देखियो’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरुले मेलमिलाप चाहे पनि सरकारले नचाहेको आरोप लगाउनुभएको छ । ४३ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले सरकारले